Jawaab adag oo ka socota Imamoğlu ilaa Canal Istanbul Tender | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulJawaab adag oo ka socota Imamoğlu ilaa Canal Istanbul Tender
26 / 03 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
ficilcelin adag laga bilaabo imamogl ilaa kanaalka istanbul jilicsan
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu soo saaray digniino cusub oo ku saabsan cudurka coronavirus, kaasoo saameeyay adduunka iyo dalkeenna noloshiina joojiyey. keliya ma aha ee Turkey, ay ka filayaan in loo keeno si ay xayiraad Istanbul ay gacanta ku İmamoğlu carabka ku adkeeyay, in habkan of tabar daranyahay, waayo Channel İstanbul'lu ayaa sidoo kale ka jawaabay in ajandaha.
Imamoglu wuxuu yidhi, Maaha wax la rumaysan karo; laakiin markii ay dadku dhibaataysan yihiin, maahan in qof maanta Kanal Istanbul joogo. Haa, maanta, gudaha qaab dhismeedka mashruuca Canal Istanbul, waxaa jira hindise loogu talagalay gadiidka buundooyinka Odabaşı iyo Dursunbey. Awoodda qandaraasyada wadooyinka, 2020 bilyan oo lira ayaa loo qoondeeyay miisaaniyadda 8. Oo weliba maanta, ka hor ay shaqo ama dakhli badiyay sababtoo ah waxaa jira malaayiin dad ah oo aan hoos u xidhi karin goobta shaqada, ee Turkey iyo Istanbul. Maxaan ugu kharash gareynin kheyraadkeenna dadkeenna, sida Kanal Istanbul, halkii aan ku bixin lahayn mashaariicda daah-furka? Ilaahay dartii, waa shaqo lagu burburiyo buundada maanta oo la sameeyo; ama in la taageero malaayiin dad ah oo ka walwalaya mustaqbalkooda guriga? Ma qori karo magaca isku dayga in Kanal Istanbul laga soo saaro Dhibaatada Coronavirus.
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda Istambul (IMM), wuxuu sameeyay bayaanno cusub oo ku saabsan cudurka dilaaga ah ee coronavirus, kaasoo sidoo kale saameyn ku yeeshay waddankeenna adduunka. İmamoğlu, ayaa yiri: "dhimashada ugu horeeyay ee ka dhacay dalka Turkiga, halkaas oo coronaviruses 18 toddobaad ka 1-kii March. Nasiib darrose, tirada bukaannadeenna maalinba maalinta ka dambaysa way sii kordhayaan. Markii tirada bukaannadeenu soo dhowaatay 2, ayaa muwaadiniinteenna naftooda ku waayey 500. Sidaad ogtahay; Cudurka faafa wuxuu si xawli ah ugu fidaa qaarada Yurub, kaas oo anaguna aan ku lug leenahay. Bal eeg, waxaan rabaa inaan ku siiyo tiro aad u cajiib ah. In Turkey, halkaas oo ay dhimasho ugu horeysay ee ka dhacay on 59 March, tirada dadka fayruska ka ee dunida 18 191 kun oo qof, tirada dadka naftooda ku waayey ahaayeen 127 7 kun. Tirada bukaanka ku nool qaarada Yurub, ee aan hada nahay, waxay ahayd 807 kun 74, tirada dhimashadana waxay ahayd 760 kaliya. Toddobaad uun baa dhaafay; Tirada 3 kun ee adduunka ayaa ka badan tirada 352 kun ee bukaannada ah. Nasiib darrose, tirada dhimashada, oo ahayd 191 kun 472, waxay ahayd tiro ku dhow 7 kun adduunka oo dhan. Bartamaha Yurub ee aan ku nool nahay, cudurka faafa si dhakhso ah ayuu ugu faafaa. Toddobaad gudihiis, tirada bukaannada waxay ku kordheen 800 jeer, oo ka badan 22 kun. Tirada dhimashada ayaa kordhay ku dhawaad ​​1 jeer waxayna soo dhowaatay 3 kun. ”
"Ka feejignow sida ay khatarku u tahay"
Fadlan fadlan la soco sida dhakhsaha uu cudurku u sii kordhayo, sida ay khatarku u weyn tahay. Ma ka war qabtaa? Taasi waa sababta ay tahay inaad guriga joogtid, marka waa inaad xaqiiqdii ilaalisaa fogaanta bulshada. Ma iska indho tiri kartid noloshaada. Haddii aan dadka sii hayno, dunidu way noolaan doontaa. Cudurkan, haa, wuxuu ku dhacaa dadkeena da 'weyn. Waan ognahay taas. Description Our sax ahayd markan, laakiin waxaan sidoo kale ogahay in labadiinaba aad labadaba waa in dunida waxa ay dadka dhallinyarada ah ku nool yihiin dalka Turkiga nasiib dhimashada. Marka qof walbaa waa inuu aad u taxaddar badan yahay, taxaddar badan yahay una dhaqmaa xeerarka. Fiiri, dhammaadkii Febraayo, inta uu cudurku ku sugnaa Bariga Fog, waxaan bilownay in aan ka war-helno waxqabadka magaalada IIM sidii IMM. Waxaan sharraxnay xeerarka nadaafadda ee shaashadda magaalada, basaska, xad-dhaafyada. Waxaan si dhakhso ah u bilownay inaanu jabanno gaadiidka dadweynaha Kooxaheenna nadaafadda guur-guura, oo aan aasaasnay ​​7-dii Maarso oo hadda aan ku sii kordhay 52, waxaan u tirtirnaa goobaha dadweynaha, meelaha lagu cibaadeysto, fagaarayaasha iyo meelaha la midka ah kooxdaan xoogga badan. ”
"Fikradaheena AQOONKA iyo MUWAADINIMADAADA HOOSE KA HADA
“Bukaankii ugu horreeyay ee dalkeenna waxaa laga dhawaaqay saqdii dhexe ee Maarso 11. Subaxdii Maarso 12, waxaan baajinay ISMEKs, matxafyada, maktabadaha, xarumaha dhaqanka, tiyaatarada magaalada, taasi waa, meelaha ay dadku isugu yimaadaan, iyo howlaha oo dhan. Isla habeenkaas, waxaan ognahay inay dowladdu fasaxeyso machadyo iyo iskuulo qaarkood. Waxaan dhamaanteen wada aragnay in tartamada isboorti la ciyaaray iyadoo aan dhagaystayaal la aheyn, oo dib loo dhigay toddobaad kadib. Markii hore, talaabooyinkan horudhaca ah ee ay qaaday degmadu iyo tallaabooyinka ay qaadeen qaar ka mid ah hay'addeenna gobolka waxay umuuqdeen kuwo xad dhaaf ah qayb weyn oo ka mid ah bulshada. Xitaa faallooyinka noocan oo kale ah ayaa la sameeyay. Laakiin howsha loo soo maray waxay muujisay in; waan qaadi karnaa oo waxaan qaadi karnaa xitaa talaabooyin aad u adag. Waxaan kuu sheegay in cudurka dillaacay uu kor u kacay tirada bukaannada iyo dhimashada ilaa 1 usbuuc gudihiis. Markuu faafidda cudurku sii kordhayo, tallaabooyinku sidii hore ma sii adkaanayaan. Waa lagama maarmaan dhammaanteen inaan qaadanno taxaddar hore kahor. Bal qiyaas, tirada dadka u dhintay cudurka faafa ee adduunka oo keliya 3 usbuuc ka hor. Maanta, tirada dadka ku dhintay Talyaaniga kaligood waxay ahayd 1. Markaa waxaan nidhi; Waxaan kaliya kula dagaalami karnaa cudurka faafa anagoo qaadanayna talaabooyin xagjir ah iyo talaabooyin. Sidaad ogtahay, howshan, IMM ahaan, waxaa jiray tillaabooyin aan qaaday si looga hortago biyo yaraan iyo gaas. Tallaabooyinka sida ka dhigista gaadiidka dadweynaha lacag la’aan loogu talagalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka, iyo tillaabooyinka sida kiro ka helista goobaha shaqada ee degmooyinkeenna waxay ahaayeen tallaabooyin hor leh. meelo kala duwan ee dalka Turkiga, ahaa horyaal ah ee na degmooyinka kale. Waxaan ka qaadnay qaar ka mid ah oo aan adeegsannay. go'aamada Kuwan waxaa ka muuqataa by Hay'adaha kale ee Dawladda sida ugu dhaqsaha badan, dhammaan go'aamada ka muuqda Turkey ayaa Maarraynta qaab. "
"Haddii si ay u sameeyaan TURKEY Istanbuul Xuduudda ay sugayaan gacanta"
Heerka gaadiidka dadweynaha ee Istanbul wuxuu hoos uga dhacay 80 boqolkiiba. Laakiin weli waxaa jira in ka badan 1,2 milyan oo duulimaad oo ku sugan Istanbul. Haddii aan ku darno adeegyo kale sida tagaasida iyo basaska yar yar, in ka badan 1 milyan oo qof oo ku sugan Istanbul ayaa wali adeegsada gaadiidka dadweynaha maalin walba. Tani waa khatar weyn. Si kastaba ha noqotee, xaalad degdeg ah, waa inaad ku socotaa masaafad u dhexeysa guriga. Waan ogahay in qaar idinka mid ahi u soo baxayaan inay ka shaqeeyaan waddooyinka. Waxaan rumeysanahay in dowladdeena ay sameyn doonto dadaal ay ku xalliso tan. Waxaan rabaa inaan rumeysto In Turkey, laakiin ma ugu yaraan Istanbul, oo ka socda dawladda; Waxaan filaynaa daraasad ku saabsan bandoowga si tartiib tartiib ah, loo xakameeyay. Waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysanno arrintan. Aan mar kale hoosta ka xariiqo; keliya ma aha ee Turkey, waxaan filaynaa xadaysan gacanta ugu yaraan Istanbul. Maalmaha soo socda, waa sax, qurux inay lahadasho dadweynaha. Nasiib darrose, haddii aan la qaadin tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah maanta, waxa iska cad inay jiri doonto rajo xumo mustaqbalka. Sidaa darteed, waa inaan go'aanno aad u xasaasi ah oo xagjir ah arrintan ka qaadanno. Nasiib darrose, arrimahan kaliya maahan ereyo. Dabcan waan tukan doonaa; laakiin nasiibdarro magaaladan iyo dalkan uma diyaarin karno maalmaha soo socda annagoo tukanaya. Haddii ay jiraan isbeddelo waaweyn oo dunida ka dhacay oo dhibaatadan faafa ah, waddamada maamusha geedi socodka qaadaya tillaabooyinka saxda ah maalmaha dhibaatooyinka ee maalintaas waxay gaari doonaan meelaha saxda ah mustaqbalka howshan. Marka waxaan jecelahay inaan mar labaad waco taas; Qaadashada go'aannada xag-jirka ah maanta cabsi la'aan iyo dhaha 'laakiin,' aad ayey muhiim ugu tahay caafimaadka bulshada, caafimaadka shaqaalaha caafimaadka, niyadda bulshada iyo cilmu-nafsiga. Haddii maaddada ay tahay nolosha aadanaha iyo cilmu-nafsiga bulshada, rajooyinka dhaqaale waa inay wax yar sugaan. Waa inaan qaadnaa talaabooyin ku habboon.
“MARKA MLLLT DIIWAANGALIN KARO, CHANNEL MA AHAYN IN ISTANBUL”
“Waxaa jira hal shay oo dheeri ah oo ay tahay in la sugo oo aan xitaa dhici doonin haba yaraatee. Ma doonayo inaan ku daro sadarka noocan ah khudbad caynkan oo kale ah maanta: Kanal Istanbul! Maaha wax la rumaysan karo, laakiin ma ahan wax la saadaalin karo inuu qof maanta joogo Kanal Istanbul inta dadku xanuun qabaan. Haa, maanta, gudaha qaab dhismeedka mashruuca Canal Istanbul, waxaa jira hindise loogu talagalay gadiidka buundooyinka Odabaşı iyo Dursunbey. Awoodda qandaraasyada wadooyinka, 2020 bilyan oo lira ayaa loo qoondeeyay miisaaniyadda 8. Oo weliba maanta, ka hor ay shaqo laga badiyay ama ay tahay in dakhli malaayiin qof oo ku nool dalka Turkiga iyo xafiiska Istanbul awoodin xiran yahay. Dhawaan, 50 kun oo qoys ayaa ka dalbaday kaalmada bulshada IMM. Waan sharixi doonaa faahfaahinta kuwaan. Waxay u egtahay in jaantusku uu sii kordhin doono si aan macquul ahayn muddada soo socota. Maxaan ugu kharash gareynin kheyraadkeenna dadkeenna, sida Kanal Istanbul, halkii aan ku bixin lahayn mashaariicda daah-furka? Ilaahay dartii, maanta waa shaqo lagu burburiyo buundada oo la sameeyo; ama in la taageero malaayiin dad ah oo ka walwalaya mustaqbalkooda guriga? 'Ma magacaabi karo magaca isku dayga in laga baxo Coronavirus Crisis, Kanal Istanbul, fadlan, waad gelisay.'
"WAA INAAD NOLOSHI KARO"
“Hadda waa inaan iskaashi ku sameynaa howshan si wada jir ah. Waan wada guuleysan doonnaa. Hawshan, waxaan rabaa in muwaadiniinteyda reer Istanbul ogaadaan; Waxaa jira IMM u shaqeeya 16 milyan oo qof. Waxaan leenahay 39 degmo oo ay wehliyaan IMM. Waxaan sii wadi doonnaa inaan qaadno tallaabooyin cusub oo muhiim ah qaab dhismeedka mustaqbalkeena ee la xiriira cudurka faafa ee adduunka. Istanbulites waligood keligood ma dareemi doonaan. Weligiis ma dareemi doono wax caawin la'aan ah. Waad uga faa'iideysan kartaa qadka Alo 153 ee maado kasta. Faahfaahinta berri ayaan sharxi doonaa; Wixii aan ku diyaarinay Xarunteena "Gargaarka iyo Isuduwidda" ee aan ka sameynay xarunteena Yenikapı, waan kula wadaagi doonaa. Ka dib markaan soo bandhigo xaruntan, waxaan sidoo kale kuu sheegi doonaa wadashaqeynta aan adiga ku dhisi doonno. Weligaa keli ma tihid. Sidaad ogtahay, waxaan bilownay arji cusub shalay. Waxaan ka bilownay adeeg latalin nafsi ah taleefanka 02124494900. Way fududahay in la yiraahdo 'guriga joog', waan ogahay. Aniguba waan aqaan dhibaatada. Wadajir ahaan, waxaan uga gudbi doonnaa dhibaatooyinka guri ku noolaanshaha. Laakiin marka hore, caafimaadkaaga. Noosheeg dhibaatooyinkaaga, laakiin fadlan guriga joog marwalba, ha tagin jidadka, ha u isticmaalin baabuurta dadweynaha, waligaa gurigaaga ha uga tagin adiga oo dhawra waajibaadka heerka ugu sarreeya. Guriga joog Istanbul Waan wada guuleysan doonnaa. Berrito ayaan ku arki doonaa.
Yaman hadalo adag oo ku saabsan TÜVASAŞ
Seyfettin Yilmaz oo ka soo jeeda dhaleeceynta adag ee metro
Dhaqdhaqaaqa Tareenka Heerka Sare (YHT) oo ka yimid Yurub
Wasiir Kılıçdan ayaa ka jawaab celiyay dhaleeceynta qofka hurda
CHP laga bilaabo Ankara Metro illaa dowladda Izmir ee iligga iyo mitirka…